प्रथम बडीगाड महोत्सव तथा पौँदी न्वागीमेला अपडेट : आज देखी भलिबल प्रतियोगिता, तुरतरे तालमा नौका विहारको आकर्षण, हिंजो रु ४४ हजारको टिकट बिक्री ! | ebaglung.com
२०७५ मंसिर ३, सोमबार ०६:५८	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
कमल पौडेल, खारबजार बडीगाड २०७५ मंसिर ३ । कला संस्कृति कृषि र पर्यटन समृद्ध बडीगाडको आधार, प्रथम बडीगाड महोत्सव तथा पौंँदी न्वागी मेला नमुना बडीगाडको पूर्वाधार भन्ने नारा सहित शनिवार देखि सुरु भएको प्रथम बडीगाड महोत्सव तथा पौंदी न्वागी मेलाको दोश्रो दिन विविध प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम तथा कलाकारहरुको प्रस्तुति सम्पन्न भएको छ ।
अध्यक्ष कप राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगिताका विविध चरणका खेलहरु चलिरहेका छन्। विभागीय टिम सहित सातै प्रदेशका समुहको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता आज सोमवार सम्म चल्नेछ । आइतवार नै वडा स्तरीय सोरठी भैलो प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ ।
६ समुहको सहभागिता रहेको सो प्रतियोगितामा कला संस्कृति संरक्षण मञ्च बडीगाड १ तुन्डाडा प्रथम, रणसिंहको समुह बडीडगाड ८ व्दितिय तथा जलजला समुह वडा नं. ४ को समुह तृतिय भएका छन् ।
त्यस्तै सरायँ नृत्य प्रतियोगितामा हिरा वहादुर राना प्रथम, मान वहादुर भुजेल व्दितिय, तथा मिन वहादुर थापा तृतिय भएका छन् । त्यस्तै बडीगाड आइडलको अडिसन सम्पन्न भएको छ । अडिसनवाट २० जना प्रतिस्पर्धी प्रथम चरणमा प्रवेश गरेका छन् । यता शिलु भट्टराई, दुर्गेश थापा, उज्वल गिरि लगाएतका कलाकारहरुले आफ्नो सांगीतिक प्रस्तुति पस्केका थिए ।
पहिलो दिन झाँकी सहित दशौं हजार मानिसको उपस्थिति रहेपनि दोश्रो दिन २ हजार २ सय टिकट विक्रि भएको आयोजकले जनाएको छ । प्रति टिकट रु २० दर राखिएकोले रु ४४ हजार आयोजकलाई प्राप्त भएको छ ।
आज सोमबारको कार्यक्रममा कराँते फाइनल, खुल्ला भलिवल प्रतियोगिता, मावि तह वक्तृत्वकला प्रतियोगिता, खुल्ला साँस्कृतिक कार्यक्रम, लगाएतका कार्यक्रम रहेका छन्। सोमवार नै कलाकारहरु विमलराज क्षेत्री, कालिका रोका, पुरुषोतम न्यौपाने (पूर्खे वा) लगाएतको प्रस्तुती रहने महोत्सव मुल समारोह समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण भट्टराईले ईबागलुङलाई जानकारी दिए ।
बडीगाड गाउँपालिका तथा पौंदी क्षेत्रकै संस्कृति प्रवद्र्धन, पर्यटन क्षेत्रको पहिचान र प्रचार तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको लक्ष्य सहित महोत्सव आयोजना गरिएको हो।
यस्तै महोत्सवकै अवसर पारेर वर्षामा पहिरोको कारण वनेको कृत्रिम तुरतुरे तालमा डुंगा संचालनमा ल्याइएको छ । र्याफ्टीङमा प्रयोग गरिने डुंगालाई तालमा चलाउन लागिएको हो । ढोरपाटन र बडीगाडको सीमानामा पर्ने सो तालमा दैनिकरुपमा आन्तरिक पर्यटक वढ्दै गएका छन् ।